Xog la xariirta COVID-19 looguna talagalay dadka aan haysan daganaanshaha sharciga ah - helsenorge.no
Xog la xariirta COVID-19 looguna talagalay dadka aan haysan daganaanshaha sharciga ah
Qof kasta oo ku nool Norway wuxuu xaq u leeyahay baaritaanka COVID-19 oo bilaash ah iyo daryeel caafimaad haddii uu qabo COVID-19.
Astaamaha COVID-19 waxaa ku jira qufac, qandho, neef yari iyo luminta dareenka urka iyo dhadhanka. La xariir adeegga caafimaadka haddii aad yeelato astaamaha COVID-19 ama ay kula tahay inaad qabi karto caabuqa. Waxaad la xariiri kartaa adeegga caafimaadka ee magaaladaada ama waxaad wici kartaa adeegga caafimaadka degdega ah ee saacadaha ka baxsan kuwa shaqada ood ka wacayso taleefanka: 116117.
Haddii aad ku nooshahay Oslo ama Bergen, waxaad heli kartaa caawimaad lagaa siiyo baaritaanka iyo daryeelka caafimaadka oo lagu baxsho Xarunta Caafimaadka ee Dadka Soo galootiga bilaa Sharciga ah.
Baaritaanka COVID-19 waa bilaash.
Markaad la xariirto adeegga daryeelka caafimaadka, uma baahn doontid inaad keento baasaboorkaaga ama aqoonsi kale.
U sheeg haddii aad u baahan tahay turjumaan. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho turjumaan luuqadaada ku hadla. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa kuu balamin kara turjumaan. Adeegaan bilaash ayaad ku helaysaa. Turjumaanku wuxuu mafrayaa isla masuuliyada dhawrista sirta.
Shaqaalaha caafimaadka ee baaritaanka qaadaaya ayaa dooran kara in lagaa qaado baaritaanka degdega ah ama kan caadiga ah. Haddii aad qaadatay baaritaanka degdega ah, waxaad heli doontaa natiijada 20 daqiiqo gudahood. Haddii aad qaadato baaritaanka caadiga ahna, waxaad natiijada helaysaa 1-4 maalmod gudahood.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka waajib ayaa ka saaran dhawrista sirtaada. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan la wadaagi doonin xogta kugu saabsan adigga iyo caafimaadkaaga cid kale.
Haddii aad qabto COVID-19, waa qasab inaad ka go’doonto bulshada. Waxaa lagu siin doonaa hooy bilaash ah ood joogi karto muddo 10 maalmood ah ilaa qandhadu kaa jabto. Waxaa lagu siin doonaa cunto iyo cabitaan. Intaad ku jirto go’doonka, ma awoodi doontid in cid kusoo booqato. Ma awoodi doontid inaad cid booqato ama aad adigu banaanka u baxdo.
Haddii aad la joogtay qof qaba caabuqa COVID-19, waa qasab inaad gasho karantiil 10 maalmood ah. Waxaa lagu siin doonaa baaritaan bilaash ah iyo meel aad joogto halkaasoo aad daganaan karto intaad karantiilka ku jirto. Waxaa lagu siin doonaa cunto iyo cabitaan. Intaad ku jirto karantiilka, ma awoodi doontid in cid kusoo booqato. Banaanka waad u bixi kartaa, laakiin ma awoodi doontid inaad cid booqato.
Talaalka COVID-19 ayaa marka koobaad la siinayaa qof kasta oo ka wayn 65, iyo qof kasta oo leh astaamo xanuun oo ka dhigan inuu si xun ugu jiran karo hadduu ku dhaco caabuqa COVID-19. Haddii saraakiisha dawladu ku taliyaan in dhammaan dadka qaangaarka ah la talaallo, talaalka ayaa sidoo kale la siin doonaa dadka aan sharciga wadanka ku joogin. Talaalku waa bilaash. Talaalku wuxuu sababi karaa dhibaatooyin ka dhasha. Kuwa ugu badan dhibaatooyinkaan ayaa ah xanuunka gacanta, caajis yar, madax xanuun iyo, mararka qaar, qandho. Astaamahaan ayaa kaa ba’aaya dhawr maalmood kadib.
Markii ugu dambaysay ee la cusbonisiiyay Talaado, Bisha Koobaad 26, 2021